TAKAITRAN’I DEL KELY : “Mbola anjakan’ny mpaka an-keriny ireo toerana lavitry ny Miaramila”
Velon-taraina ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna, Depiote Ratsimanosika Alexandre fa miverina mirongatra izaitsizy indray ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. 13 juillet 2021
Toa tsy nahafoana ny trangana fakàna an-keriny izay tena nalaza tao Tsaratanàna, hoy izy, ny fahafatesan’i Del Kely, jiolahy mpanao “kidnapping” tena nikoizana.
Anisan’ireo Distrika voasokajy ko faritra mena amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny Distrikan’i Tsaratanàna. Ny asan-dahalo sy ny fanafihan-jiolahy mahery vaika no tena nampitondra faisana ny mponina. Tsy mitsitsy ireo olon-dratsy fa mahavita mandatsaka aina avy hatrany rehefa tsy mahazo izay tadiaviny. Nandritra ny taona maro izay no saika nandrenesana trangana fandrobana hatrany amin’ireo Kaominina mandrafitra ity Distrika ity. Taty aoriana nitsangana ny tambajotran-jiolahy izay mpanao fakàna an-keriny ikoizana.
I Del Kely no fantatra fa lehiben’ireo jiolahy tamin’izany ary tsy tao Tsaratanàna ihany fa anisany nitondra faisana noho ny asa ratsin’izy ireo ihany koa ny Distrikan’Ambato Boeny hatrany Ambatondrazaka sy Moramanga. Raha tsiahivina ny volana mey lasa teo no voatifitra tao Morarano Gara, ao anatin’ny Faritra Alaotra Mangoro i Del kely rehefa nifampikarohana hatramin’ ny ela. Nihevitra ny mponina tao amin’ireo Distrika tena nanjakany fa hilamina amin’izay kanefa toa mifanohitra amin’izany ny trangan-javatra iainan’izy ireo ankehitriny, raha ny tatitra nataon’ny Solombavambahoakan’i Tsaratanàna, Ratsimanosika Alexandre. Nambarany fa mbola tsy voafehy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ity Distrika ity na dia teo aza ny nahafatesan’i Del Kely.
Nisehoana fakana an-keriny miisa roa
Araka ny tatitra noentin’ny Depioten’i Tsaratanàna nandritra ny fihaonana mivantana teo amin’ireo Solombavambahoaka sy ny mpikambana eo anivon’ny Governemanta, ny herinandro lasa teo iny dia trangana fakana an-keriny miisa roa sahady no niseho tao Tsaratanàna tato anatin’ny tapa-bolana monja. “Iray volana mahery kely teo izay dia nieritreritra isika hoe, nilamina ny Distrikan’i Tsaratanàna taorian’ny nahazoana an’i Del Kely sy ny fahafatesany. Ny zava-misy anefa amin’izao fotoana izao dia mirongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana. Tato anatin’ny tapa-bolana nifanesy izay dia fakana an-keriny indroa nisesy no niseho tany amin’ny tapany atsimon’ny Distrikan’i Tsaratanàna”, hoy ny Depioten’i Tsaratanàna, Ratsimanosika Alexandre. Mitaintaina andro aman’alina, hoy izy, ireo mponina satria tsy mitsitsy fa mahavita mamono avy hatrany ireo olon-dratsy.
Heverina fa mbola ireo tambajotra naman’i Del kely ireto manohy mampihorohoro ny mponina ireto. Raha tsiahivina dia efa maty lavon’ny balan’ny Zandary ihany koa ny vadin’i Del Kely, izay mbola nikasa hanohy ny asa ratsy nataom-badiny. Maty voatifitra niaraka taminy tamin’izany ny jiolahy miisa roa hafa izay voalaza ho namana akaiky an’ity jiolahy raindahiny. Taorian’ny nahasamborana an’i Del Kely dia maro ihany koa ireo namany no voasambotra ankoatra ireo lavo tao anaty fifandonana. Hatreto anefa tsy mety milamina ny Distrikan’i Tsaratanàna ary vao mainka nampirehitra ny hatezeran’ireo jiolahy mbola miriaria ny fahafatesan’ireo namany.
30 tapitrisa Ariary ny takalon’aina iray
Araka ny fitantaran’ny loharanom-baovao dia ao anatin’ny fanafihan-jiolahy mahery vaika no akan’ireo olon-dratsy izay olona halain’izy ireo an-keriny. Andian-jiolahy maro no manatanteraka ny fanafihana miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika, avy hatrany dia manao amboletra miditra ao an-trano ary maka an-keriny izay olona efa kendren’izy ireo. Lasa lavitra ny tanàna mihitsy vao miantso ny fianakavian’ireo lasibatra ireto jiolahy ary manonona volabe ho takalon’ny ain’izy ireo. Fantatra fa misy ny ady varotra atao izay vola farany hifanarahan’ny fianakaviana sy ireo olon-dratsy no hamotsorana an’ireo olona nalaina an-keriny. Matetika anefa dia volabe an-tapitrisany maro hatrany no takin’ireo olon-dratsy izay vao manaiky hamotsotra izay lasany ry zalahy, araka ny tatitra nataon’ny Depioten’i Tsaratanàna hatrany. Tao amin’ireo trangana fakana an-keriny miisa roa niseho tao an-toerana tato anatin’ny tapa-bolana dia nisiana rà mandriaka ilay tranga voalohany ary avotra soa aman-tsara kosa ilay nalaina an-keriny tamin’ilay tranga faharoa rehefa nanaiky nifampiraharaha tamin’ireo jiolahy ny fianakaviana.
“Tamin’ny voalohany dia nisy famoizana ain’ilay olona nalaina an-keriny ary tamin’ny faharoa dia avotra ihany ilay olona rehefa naloa ny vola notakin’ireo mpaka an-keriny. Vola hatrany amin’ny 30 tapitrisa Ariary no takian’ireo olon-dratsy amin’izany”, hoy ny fitantarany.
Mivangongo amin’ny toerana iray ny Miaramila
Nanaovan’ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fanamby lehibe ny tsy maintsy ahatratrarana an’i Del Kely, jiolahy raindahiny tany amin’iny Distrikan’i Tsaratanàna ao anatin’ny Faritra Betsiboka iny. Nisy ny hetsika fampandrian-tany goavana natao tamin’izany ary mbola mitohy mandrake ankehitriny io hetsika io. Nambaran’ny Depiote Ratsimanosika Alexandre anefa fa tena misy tokoa ireo Miaramila mpampandry tany izay mahavita ny asany araka ny tokony ho izy saingy mivangongo amin’ny toerana iray izy ireo ka izay faritra tsy misy azy dia tena andihizan’ireo jiolahy sy ny dahalo mpangalatr’ omby mihitsy. “Marina fa manana mpitandro filaminana izahay satria misy tobina zandary any izay misy Miaramila 600 any ho any, tahaka izany ihany koa any Bekapaiky dia misy Miaramila, ary ao amin’ny Kaominina Brieville dia misy Miaramila ihany koa. Heverinay fa ireo Miaramila ireo dia tokony hahafehy ny tsy fandriam-pahalemana raha toa ka aparitaka fa ny zavatra hitanay dia mivangongo amin’ny toerana iray izy ireo ary misy faritra tsy andalovan’ireo Miaramila ireo mihitsy ka ireo faritra ireo no lasibatry ny fakàna an-keriny”, hoy ny nambarany. Araka izany dia takian’izy ireo ny hanaparitahana an’ireto mpitandro filaminana mba hahenika ny Distrikan’i Tsaratanàna iray manontolo. Nanaovany antso vonjy manokana tamin’ny Governemanta ny hifehezana faran’izay haingana an’io lafiny tsy fandriam-pahalemana io. “Izay zavatra izay no takinay amin’ny Governemanta hoe ankoatra ireo asa fampandrosoana izay hoentina any dia mila fehezina ihany koa ity tsy fandriam-pahalemana ity”, araka ny antso nataony.